Pirimeer Liigii Ingiliiz: Maarsiyaal, Saalaah, Maanee, fi Peereeyiraa'n filamaniiru - BBC News Afaan Oromoo
Pirimeer Liigii Ingiliiz: Maarsiyaal, Saalaah, Maanee, fi Peereeyiraa'n filamaniiru
Madda suuraa, Tom Purslow
Antoonii Maarsiyaal taphoota 3 irratti galchii 4 lakkoofsiseera
Taphoota dhuma torbee darbeetiin Liivarpuul, Kaardiif Siitii salphaatti yoo injifatu, Maanchistar Yunaayitid Eevartan moo'uun adeemsa gara dursummaatti godhan bareechaniiru.
Waatifoordiif Boornimaz akkasuma qabxii sadii yoo sassaaban, Weestihaam Leestar waliin qixa ba'aniiru.
Balaa helikooptaraan abbaan qabeenyaa Leestar Siitii du'an
Ijoolleen lafa jala torban lamaaf turan tapha Maan Yunaayitid daawwatan
Mee taphattoota kamfaatu dandeettii mishaa agrsiisuun filannoo garee cimaa Gaarzi Kiruuksi torbee kanaa keessa seenani?
Galchi eegaa Luukas Faabiyaaniskii (Weestihaam)
Faabiyaanskiin kubbaawwan torba galchii ta'uu malan hambiseera
Tapha Weestihaam gara Leestar deemuun qabxii itti qooddateen dandeettiin karra eegaa kanaa adda ture. Taphattoonni Leestar isa taranii galchii lakkoofsisuun itti cimee ture.
Lammiin Poolaandi kun kubbaawwan galchii ta'uu malan torba qoluu danda'eera.
Ittisa- Paabloo Zaabaleetaa (Weestihaam), Viiktar Liindaloof (Maan Yunaayitid), Baalbuweenaa (Weestihaam)
Paabloo Zaabaleetaa: Taphataan kun umuriinsaa walakkeessaa soddomaa keessa ta'us, fedhiifi humni taphaa dirree keessatti qabu ajaa'ibsiisaadha. Taphataa sarara duraa Leestar Wiilfireed Indiidii sochii dhorkee ture.
Zaabaleetaan tapha Leestar qixa itti ba'e kanaan, taphattoota gareesaa kamiyyuu caalaa kubbaa 64 tuqeera.
Viiktar Liindeloof : Kana dura dogoggora hojjatuun, Yunaayitid keessaa maal godha? Jedheen ture. Torbanoota lamaan darbanitti garuu yaadakoo na jijjiirsisee jira.
Tapha Maanchistar 2'f 1'n Eevartaniin injifaterratti kubbaawwan hedduu daangaa peenaalitii keessaa fageesseera.
Faabiyaan Baalbuweenaa : Akka dadhabbii taphataa kanaatti osoo ta'ee, Weestihaam Leestar irraa qabxii sadi fudhatee ba'uu qaba ture.
Maalumayyu ofiif galchii jalqabaa Weestihaamiif ammoo galchii tokkittii tapha kanaa lakkoofsisus, galchiin Leestaroonni lakkoofsisanis isa tuqxee galte.
Taphattoota gidduu: Roobeertoo Peereeyiraa (Waatifoordi) Looftas Chiik (Chelsii) Luukaa Miiliivooviichi (Kiriistaal Paalaas) Roos Baarkileeyi (Chelsii)
Roobeertoo Peereeyiraa: Galchii Peereyiraan lakkoofsiseen kan walfakkaatu yeroo dhumaaf kanin arge bara 1981 dorgommii 'FA CUP' irratti taphataan Tootanhaam Riikii Vaalii taphattoota Maan Siitii walakkaa bira darbuun yoo galchii lakkoofsisudha.
Arjantiinonni galchii akkasii lakkoofsisuun barmaata isaanii ta'us, galchiin kun salphumatti ajaa'ibsiiftuu turte.
Looftas Chiik: Tapha Yuurooppaa Liig irratti Chelsiin Beet Booriisoov yoo moo'u hattiriik kan hojjate yoo ta'u, PL irrattis Barnileey yoo moo'an galchoo tokko lakkoofsiseera. Haala kanaan yoo itti fufes abdii dhaabbiindhaan hiriiruu taphataa qabudha.
Luukaa Miiliivooviichi: Torbee darbe Eevartan waliin yoo taphatan rukuttaa peenalitii fashalsus, tapha Arsenaal irratti garuu penaalitii lamaan aargaman dogoggora tokko malee lakkoofsise.
Kunis qabxii qoodachuun akka ba'aniif isaan gargaaree jira.
Roos Baarkileeyi: Baarkileey Eevartanirraa ba'ee Chelsii yoo galu waan milkaa'uuf natti hin fakkaanne ture. Fooyyiin tibbana mullisaa jiru garuu ajaa'ibadha.
Galchiiwwan lama akka lakkaa'amaniif kubbaa mijeessee yoo kennu, tokko ammoo galchuu danda'eera.
Taphattoota Fuulduraa: Maanee (Liivarpuul), Saalaah (Liivarpuul), Maarsiyaal (Maan Yunaayitid)
Sadiyoo Maaneeኔ: Galchiiwwan lama Kaardiif irratti lakkoofsise dansaa ta'uurra darbee sochii cimaa fedhiin guutame agarsiisaa turuunsaa Liivarpuuliif carraa galchii heddu uumeera.
Saalaah waliin tokko lamaan waliif kennanii galchiin lakkoofsisan agarsiiftuu kanaati. Maaneen dandeettii Saawuzihampitanitti agarsiisaa ture mullisaa jira.
Mohaammad Saalaah: Tapha Kaardiif injifachuun Liivarpuuliif gonkumaa ulfaataa hin turre.
Saalaah Liivarpuuliif taphoota 35 irratti galchii 33 lakkoofsisuu ni beektuu?
Antoonii Maarsiyaal: Gareen Hoozee Mooriinhoo erga galchiin itti lakkaa'amee booda yoo taphatan namatti tolu. Yoo dursanii lakkoofsisan garuu nuffisiisoodha.
Poogbaa waliin sochii gaarii gochaa kan jiru Maarsiyaal, galchii lama Chelsii irratti yoo lakkoofsisu, Eevartanirrattis galchii injifannoo haala midhaagaan galcheera.
Taphoota sadi walitti aansee irratti taphateen galchii afur lakkoofsisee jira.